Link Building uye Link Quality neSalalt nyanzvi Ivan Konovalov
Mharidzo yevashanduri: Ivan Konovalov ndiye mutungamiri wenharaunda muSemalt. Kambani ine vanopfuura 10 000 makambani akabudirira uye nguva dzose ichifambidzana nekanakisisa iyo teknolojia.
Tsvaga injini dzinoita basa rakanaka rekuisa mawebhusayithi marefu zvakakosha zvikuru kumubvunzo wekutsvaga kwemuenzi.
Sezvo injini dzinotsvaga dzinogona kutumira zvakanyanya 60 muzana yemushambadzi (free) kune nzvimbo yako, hapana chikonzero chekuvaka zvibatanidzi kune site yako uye kufara iyi huru huru traffic.
Chidzidzo chekuvaka chibvumirano chakakura mukati mawo, uye iwe uchachidzidza nenguva uye sezvaunoramba uchiedza.
Zvisinei, pane humwe ruzivo rwakakosha kuti iwe udzidze kutanga uye kudzivisa matambudziko akawanda.
Nei Link Link Yakakosha
Kana iwe uchida kuwana chinhu chakafanana nefriji, iwe ungaite sei mumamiriro ezvinhu akadaro?
Ungangodaro uwane dare apo iwe unogona kutenga chigadzirwa, pasinei nokuti iko kuburikidza ne-offline kana vatengesi vekutengesa.
Kungoita chete iwe kuenda kune chitoro uye kutenga firiji usingabvunzi munhu kune zvaanorayira apo iwe unoziva kuita sarudzo yakagadziriswa.
Iwe uchasarudza chisarudzo chinoenderana nekuziva kwako, zvaunofarira, kana zvichida kuburikidza nekurumbidza kubva kune shamwari kana nhengo yemhuri. Zvisinei, kana uri kutenga firiji yekutanga muhupenyu hwako, uye iwe unoda kuita sarudzo yakagadziriswa, ungaitei? Zvingangodaro, iwe uchatsvaga mamwe mazano kubva kune mumwe munhu ane ruzivo pakutenga firiji. Iwe uchavimba nekutonga kwemunhu iyeye ndokuenderera mberi nekutenga kwako, chaiko?
IWeb Wenyika Yose inzvimbo huru. Apo injini yekutsvaga inofanira kupindura mubvunzo weshanyi, inotarisa pawebhu kuti ienzane nemigumisiro. Kubva pane kune mawebsite akawanda anogona kupa ruzivo rwakadaro, zvakaoma kuti injini yekutsvaga iite nzvimbo dzakanakisisa kumusoro uko mukutsva kwemigumisiro yekutsvaga. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mazano anobatsira.
Ngatitii mune webhusaiti yekufambisa iyo iwe unopa maitirwo ekutengesa matikiti uye pokugara muhotera dzakasiyana-siyana munyika yako yose. Iye zvino, kana iwe uine maindisi ekupinda panzvimbo yako kubva kune dzimwe nzvimbo dzinotungamirira ndege kana mahotera, iyo inobatsira zvikuru webhusaiti yako uye ikubatsire kuwana nzvimbo yakakwirira paSERPs (Search Engine Results Pages) kana ichienzaniswa kune dzimwe nzvimbo dzakafanana yako. Zvisungo zvakaenzana nekuvimba..
Apo nzvimbo mbiri dzakafanana zvakagadziriswa, iyo inowanikwa yakakwirira isiti yakagadziridza chivimbo chikuru nevanotsvaga .
Kana iwe uchigadzira mazano kune mamwe mawebsite, iwe uri kugovana ruzivo uye kuvimba pakati peumwe pane nyaya yako. Tsvaga injini dzinoda kuwirirana.
Inbound Uye Outbound Links
Kubatana kwakanyanya kune avo vanobatanidzwa vari kubuda kune mamwe mawebsite, asi hutano hunobuda hunoenda kuna avo vanotumira mushanyi kubva pawebsite yako kune imwe nzvimbo yepaIndaneti.
Zviratidzo zvakasiyana-siyana zvinoratidza kuti imwe yewebsite inokuvimbai uye mazamu anobuda anoratidza kuti unovimba zvakadini pane imwe nzvimbo .
Unhu hunogara hwakakosha kune vanhu, uye zvakare chimwe chinhu icho injini yekutsvaga inoisa kukoshesa.
Chinangwa chavo ndechekupa zviitiko zvakakosha uye zvakakosha kumubvunzo wevashandi pavanenge vachichera masora kana vanyori veboka.
Izvi zvinoreva kuti vanovimbisa kuti uri kuwana mhinduro yakanaka kubva panzvimbo dzakarurama nguva dzose.
Chii chinonzi link quality?
Ichi chinhu chinonyanya kukosha chinobatsira kutsvaga injini kusarudza kunaka nekuvimbika kwewebsite.
Paunovaka zvikwereti kune nzvimbo yako, zvakakosha kuti dzinobva kune akavimbika uye nzvimbo dzakakwirira nzvimbo.
Sezvo pane mawebsite asingagumi pane imwe nhauriro yewebsite yako yekubudisira uye kuwana hukama mukudzoka, uye pakupedzisira uine hukuru hwepamusoro pamapeji ekutsvaga, zvinokosha kuti izvo zvibatanidzi zvive kubva kune zvinyorwa zvepamusoro pane zvakapiwa chikamu.
Semalt links kubva munzvimbo dzakakwirira ndeyechiratidzo chokuti mawebhusayithi akakuvimba iwe uye izvi zvinoshandiswa zvinoshambadzira zvinoreva injini yekutsvaga kuti webhusaiti yako inogonawo kuva nechinhu chinobatsira kumutengi kutarisa.
Iyi ndiyo mhando yekurudziro yaunogona kutsvaka kana uchitenga firiji, sezvakakurukurwa pamusoro apa.
Unongokoshesa mazano kune mumwe munhu nyaya inomumwe munhu ane simba pane imwe nyaya Source .
Kuwedzera kwehutano hwakakosha huripo hunogona kutarisira kusvika pawebsite yako, zviri nani nzvimbo yako ichave!